ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီးနှင့် ပညာရေးကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ - Ministry of Education
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးသည် ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ကျင်းပသော ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Kristian Schmidt ဦးဆောင်သောအဖွဲ့နှင့် ပညာရေးကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် တက်ရောက်ဆွေးနွေးသည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဝင်းမော်ထွန်း၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးတို့မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ဆွေးနွေး ကြပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ဥရောပသမဂ္ဂမှ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ ကူညီသည့် ထောက်ပံ့ငွေ ယူရို ၂၂၁ သန်းအနက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလတွင် ယူရို ၃၅ သန်းနှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လတွင် ယူရို ၃၂.၃၇၅ သန်း လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား ပညာရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ COVID-19 တုန့်ပြန်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံချက်ကို မေလတွင် ရေးဆွဲပြီးစီးခဲ့ပါ ကြောင်း။
အထက်တန်းကျောင်းများကို ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ရန်လျာထားပြီး လိုအပ်ချက်များနှင့် အားနည်းချက်များအပေါ်မူတည်၍ ပြင်ဆင်ကာ အလယ်တန်း အဆင့်၊ မူလတန်းအဆင့်ကျောင်းများကို တစ်ဆင့်ချင်း ဖွင့်လှစ်သွားရန် စီမံဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ ကျန်းမာ၍ ဘေးကင်းလုံခြုံသော သင်ယူမှုပတ်ဝန်း ကျင်ကို ဖန်တီးလျက် သင်ယူမှုမဆုံးရှုံးစေရေး၊ မည်သည့်ခွဲခြားမှုမျှမရှိရေး၊ ကျောင်းထွက်နှုန်း လျော့ကျရေးတို့ကို ဦးစားပေးမူဝါဒ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးသင်တန်းနှင့် Grade 4,7,10 သင်ရိုးသစ် သင်ကြား သင်ယူမှုနည်းစနစ်များအတွက် အွန်လိုင်းသင်တန်းနှင့် ၅ ရက်ကြာ ကိုယ်တိုင်တက်ရောက် သင်ယူသောသင်တန်းများကို ပို့ချလျက်ရှိပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှ ဆရာ၊ ဆရာမ သုံးသောင်းငါးထောင်ကျော်အတွက် နည်းပြဆရာသင်တန်းများကို မြန်မာဒီဂျစ်တယ် ပညာရေးပလက်ဖောင်း (MDEP) အစီအစဉ်ဖြင့် ပို့ချလျက် ရှိပါကြောင်း။
ယနေ့အစည်း အဝေးတွင် COVID-19 ကပ်ရောဂါ၏ သက်ရောက်မှုများကို လျော့နည်းသက်သာစေရန် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို ပိုမိုသိရှိနားလည်နိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်းဖြင့် ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ဒေါ်စီစီပြုံးနှင့် ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်ခိုင်ခိုင်အောင်တို့က အမှာစကားပြောကြားကြား သည်။
ယင်းနောက် ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Kristian Schmidt က အမှာစကားပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍နောက် COVID-19 တုန့်ပြန်ရေးအတွက် ကျောင်းများပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ရန် ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးကော်မရှင်၏ ထောက်ခံအကြံပြုချက်များအပေါ် ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျှော့ချလျက် တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်များသို့ ဘတ်ဂျက်ခွဲဝေမှုအခြေအနေ များနှင့် အမျိုးသားပညာရေး မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း-၂ (၂၀၂၁-၂၀၃၀) ရေးဆွဲမှုအခြေ အနေများကို ဆွေးနွေးကြသည်။ ယင်းနောက် ဥရောပသမဂ္ဂ၏ အကူအညီဖြင့် ပညာရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရှေ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Total Hits : 1141752650